News - Waa Maxay Caaryadu?
Waa Maxay Caaryadu?
Waa maxay saldhig caaryada?
Qaab dhismeed dhameystiran oo loogu talagalay soo saarida badeecooyin gaar ah oo budo ah adigoo riixaya ama cusbooneysiinaya.
Intaa waxaa dheer, taageerada caaryada waxaa sidoo kale loo yaqaan saldhigga caaryada. Tusaale ahaan, mashiinka wax lagu ridayo wuxuu isku daraa oo hagaajiyaa qaybaha kala duwan ee caaryada iyadoo loo eegayo si joogto ah iyo meel gaar ah, qaybta lagu dhejin karo mashiinka shubka dhinta waxaa loo yaqaan saldhigga caaryada, iyo qaabka riixaya, habka hagida, iyo kahortaga kahor Qaabka dib udajinta wuxuu ka kooban yahay suufka dhinta iyo saxanka kursiga.
Waqtigan xaadirka ah, isticmaalka caaryada waxay ku lug leedahay shey kasta (sida gawaarida, aerospace, baahiyaha maalinlaha ah, isgaarsiinta korantada, qalabka caafimaadka, iwm.). Ilaa iyo inta ay tahay tiro badan oo wax soo saar ah, wax soo saarka caaryada ayaa lagu dabaqi doonaa, salka caaryadu waa qeyb aan kala sooc lahayn oo ka mid ah caaryada. Waqtigan xaadirka ah, shuruudaha saxda ah ee saldhigyada caaryada ayaa lagu go'aamin doonaa iyadoo loo eegayo shuruudaha wax soo saarka iyadoo loo eegayo heerar kala duwan.
Saldhigga caaryadu waa badeecad-dhammeystiran oo caaryada ah, oo ka kooban qaybo kala duwan oo saxan bir ah ku habboon, waxaana la dhihi karaa waa qalfoofka caaryada oo dhan. Sababtoo ah kala duwanaanta ballaaran ee ka-baaraandegidda ee ku lug leh saldhigyada caaryada iyo caaryada, soo saarayaasha caaryada ayaa dooran doona inay ka dalbadaan saldhigyada caaryada kuwa wax soo saara qaab dhismeedka, iyagoo ka faa'iideysanaya faa'iidooyinka wax soo saar ee labada dhinac si loo hagaajiyo tayada wax soo saarka guud iyo waxtarka.
Ka dib sannado horumar ah, warshadaha wax soo saarka qaab-dhismeedka ayaa qaan gaadhay. Marka lagu daro saldhigyada caaryada caadada ah, soo saarayaasha caaryada ayaa sidoo kale dooran kara alaabooyinka caaryada aasaasiga ah. Qaab-dhismeedka caadiga ah waxaa lagu heli karaa qaabab kala duwan, waqtiga dhalmaduna waa gaaban yahay, xitaa waa diyaar in la isticmaalo, iyadoo la siinayo soosaarayaasha caaryada leh dabacsanaan weyn. Sidaa darteed, caannimada qaab-dhismeedka caadiga ah ayaa sii kordhaya.
Si kooban, qaab dhismeedka wuxuu leeyahay aalad preforming, qalab meelaynta, iyo qalab ejection. Guud ahaan loo qaabeeyey sida guddi, Guddi (moodeelka hore), B guddiga (qaabka gadaal), guddiga C (birta laba jibbaaran), saxanka hoose, guddi la jaro, saxanka hoose ee hoose ee la jaro, iyo boostada hagaha, pin soo celinta iyo qeybaha kale ee dayactirka.
Waqtiga boostada: Sep-19-2020
Xiga: Muxuu Yahay Nidaamka Orodyahanka Ee Wasakhda Mudista
Hore: Maxay Yihiin Sideeda Nooc ee Wasakhda Cirbaddu?